» सावधान : कतै आमालाई मिठाइ भन्दै विष त खुवाउदै हुनुहुन्न ?
सावधान : कतै आमालाई मिठाइ भन्दै विष त खुवाउदै हुनुहुन्न ?
लकडाउको लामो समयपछी औंसीका लागि खोलिएका मिठाई पसलहरुमा बनाईएका विभिन्न बासी परिकारहरुको गुणस्तर कत्ती होला ? यो सोच्न जरुरी छ । वर्षको एक दिन धुमधामका साथ मनाईने औंसीमा हामीले आफ्ना आमाको लागि खरिद गरिएको मिठाईले कहिँ उनलाई नै असर त गर्दैन ?
१० बैशाख २०७७, बुधबार २१:४१
मकवानपुर । भोली मातातीर्थ औंसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन । कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशभर लकडाउन गरिएको भएपनी मातातीर्थ औंसीका कारण आज बजारका अधिकांश मिठाई असल खुले ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेका अधिकांश मिठाई तथा फलफुल पसल खुले ।
प्रशासनले बिहान ६ बजेदेखी ९ बजेसम्म खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको पसल खुल्ला गर्ने निर्णय गरेपनी सोको अवज्ञा गरिएको छ ।
गत चैत ११ गतेदेखी गरिएको लकडाउनका कारण बन्द रहेका मिठाई पसलहरु संचालनमा आए । चाड पर्वको समयमा विगतका दिनहरुमा गुणस्तरहीन मिठाईहरु बिक्री वितरण गरिएको नपाईएको होईन । लामो समयपछी औंसीका लागि खोलिएका मिठाई पसलहरुमा बनाईएका विभिन्न परिकारहरुको गुणस्तर कत्ती होला ? यो सोच्न जरुरी छ ।
वर्षको एक दिन धुमधामका साथ मनाईने औंसीमा हामीले आफ्ना आमाको लागि खरिद गरिएको मिठाईले कहिँ उनलाई नै असर त गर्दैन ?
यसरी खरिद गरिएको मिठाईको गुणस्तर कत्ती छ, यो कत्तिको फाईदाजनक छ ? यी सबै कुरामा संचालकले नभई उपभोक्ता नै सजग हुन आवश्यक छ ।